Maraykanka oo fududeeyay hawlaha xawaalladaha | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maraykanka oo fududeeyay hawlaha xawaalladaha
Maraykanka oo fududeeyay hawlaha xawaalladaha
Soomaalida ku nool gudaha Maraykanka ayaa markii ugu horreysay si rasmi ah loogu ogalaaday in laga fududeeyo dhibaatooyin waaweyn oo muddo ka haystay dirista lacagaha kaddib markii saraakiisha waaxda maaliyadda ay soo saareen qorsheyaal horle oo ay ku fududeynayaan hawlaha xawaalladaha, iyaga oo tixraacaya go’aan horey uga soo baxay congress-ka waddankaasi.
Arrintaasi waxaa gacan ka geystay Mr. Keith Ellison oo ah mudane ka tirsan aqalka congress-ka lagana soo doortay gobolka ay Soomaalidu ku badan tahay ee Minnesota wuxuuna sheegay in sharciyaddaan cusub ay muhim u yihiin xawaalladaha marka ay timaado dhinaca horumarka dalka.
Mr. Keith Ellison oo warbaahinta la hadlay wuxuu carabka ku adkeeyay in dhawr jeer uu ku booriyay waaxda maaliyadda in si degdeg ah loo fasaxo lacagaha lagu diro xawaalladaha oo ay ku tiirsan yihiin dad farabadan oo Soomaali ah.
Sida lagu soo bandhiggay daraasad uu sameeyay machadka cilmibaadhista Afrika ee ARI in ka badan hal bilyan iyo labo boqol oo malyuun oo dollar ayey sannad kasta Soomaalidu isu diraan, taasoo ka badan kala badh dakhliga soo gela dalka iyo sidoo kale guud ahaan lacagta ay deeqbixiyaashu siiyaan gobolka geeska Afrika.
Dhinaca kale, arrintaan ayaa kusoo beegmaysa, xilli caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho laga hirgeliyay adeega mashiinada lacagta lagula baxo ee ATM – inkastoo dollar un ay tahay wuxuu sahlayo la bixisteeda imminka.
Previous articleGaroowe oo leh soo dhowow ra’iisulwasaare?
Next articleRa’iisulwasaaraha oo booqasho ku tagay Puntland